QEYBTA 14 - ZUHRA
Sheeko aad u xiiso badan FAL XAASID IYO FILANWAA (QEYBTA 1:-AAD)!!!
June 14 2013 09:19:36
Markuu soo ag joogsaday iridka laga galo guriga reerkiisa ayuu si aan miyir lahayn uu u garaacay, "War maxay dhaqsi kaaga furi la' yihiin" ayuu is yiri, hadana wuu ku celiyay.
Qaramada Midoobay oo si walaac ah uga hadashay xaaladda culus oo ka taagan gobalada Jubooyinka ee Soomaaliya.
June 14 2013 09:04:26
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa war-saxafadeed uu soo saaray waxaa lagu sheegay in goluhu uu aad uga walaacsan yahay xaaladda aan wanaagsaneyn ee ka taagan gobalada Jubooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose.
WAR-SAXAAFADEED:- Madaxweynaha Soomaaliya oo lagu casuumay xafladda boqortooyada UK iyo shirka hordhaca G8.
June 14 2013 08:53:05
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa martiqaad rasmi ah ka helay ra�iisul wasaaraha UK David Cameron si uu uga qeyb galo xafladda loo sameeynayo boqortooyada Ingiriiska ee 15ka June oo ku beegan maalintii ay dhalatay iyo shirka hordhaca ee G8 ee Sabtiga 15ka June 2013.
DAAWO SAWIRO:- Golaha wasiirada oo maanta ka hadlay arimo xasaasi ah oo ku saabsan dalka.
June 13 2013 18:31:10
Golaha wasiiradda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid shirkoodii joogtada ahaa, waxaana shir gudoominayey ra�iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) waxayna ka doodeen qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin hindise sharciyeed ay soo gudbiysay wasaaradda warfaafinta, boostada, isgaarsiinta iyo gaadiidka ee dowladda Soomaaliya.
Ciidamo ka tirsan nabad sugidda oo howlgalo culus ka wada degmada Afgooye ee gobalka Sh/hoose. June 13 2013 16:37:54
Wararka naga soo gaaraya degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan in maanta ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa nabad sugida ay xaafadaha degmadaasi ka wadaan howlgalo culus oo ka duwan kuwii hore islamarkaana lagu sugaayo amaanka halkaas.
Banaanbax aad u xoogan oo maalintii labaad ka dhacay magaalada B/weyne ee xarunta gobalka Hiiraan.
June 13 2013 15:36:17
Waxaa maalintii labaad magaalada B/weyne ee xarunta gobalka Hiiraan ka dhacay banaanbax aad u balaaran oo looga soo horjeedo dhibaatada loo geeysanaayo soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika, iyadoona banaanbaxaasi ay kasoo qeyb galeen dadweyne aad u badan.
WAR DEG DEG AH:- C/laahi Cali oo si rasmi ah maanta ugu guuleeystay xilka madaxtinimada maamulka Ximin iyo Xeeb.
June 13 2013 12:20:23
Wararka goor dhaw naga soo gaaray magaalada Cadaado ee maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa waxay sheegayaan in baarlamaanka maamulkaas uu doortay madaxweynaha cusub ee 5-ta sano ee soo socota ka talin doona halkaasi.
Meydka nin fuundi guryaha dhiso oo saakay lasoo dhigay magaalada Jowhar.
June 13 2013 11:58:00
Waxaa habeenkii xalay magaalada Jowhar ee xarunta gobalka Sh/dhexe lagu dilay nin ka mid ahaa dadka deegaanka xaafadda Horseed ee magaaladaasi, iyadoona meydka ninkaasi saakay halkaasi lasoo dhigay.
Faah faahin ku saabsan dagaal ka dhacay deegaan hoostaga gobalka Gedo.
June 13 2013 11:39:54
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helaayaa dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Faa-fax Dhuun oo ka tirsan gobalka Gedo, kaas oo geeystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Maamulka Ximin iyo Xeeb oo maanta doorasho ka dhaceeysa.
June 13 2013 11:09:01
Waxaa maanta la filaayaa in magaalada Cadaado ee maamulka Ximin iyo Xeeb ay ka dhacdo doorashada xilka madaxtinimada maamulkaaasi, iyadoona amaanka magaalada iyo goobta ay doorashada ka dhaceeyso si weeyn loo adkeeyay.
DAAWO SAWIRADA:- Mr. Matt Baugh oo maanta xaflad sagootin heersare ah loogu sameeyay magaalada Muqdisho.
June 12 2013 23:27:46
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xaflad sagootin ah u sameeyey safiirkii UK Matt Baugh, oo waqtigiisii diblomaasiyiinta Soomaaliya ee sedaxda sano uu dhamaaday.
DAAWO VIDEOGA:- Madaxweyne Xasan Sheekh oo Muqdisho ku qaabilay guddiga siyaasadda iyo amniga ee Midowga Yurub.
June 12 2013 23:17:13
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta marti geliyey booqashadii ugu horeeysay ee safiiradda gudiga amniga iyo siyaasadda ee Midowga Yurub, gudigaan oo ah kan ugu muhiimsan ee go�aan gaaridda Midowga Yurub oo ka kooban safiiradda 27-ka dal ee Midowga Yurub.